अमेरिकी चुनाव : ट्रम्पले शान्तिमय रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न प्रतिबद्धता जनाउदैनन::Jalpa Khabar
अमेरिकी चुनाव : ट्रम्पले शान्तिमय रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न प्रतिबद्धता जनाउदैनन
Published on: ८ आश्विन २०७७, बिहीबार ०३:२९
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नोभेम्बरको चुनाव हराएमा शान्तिमय शक्ति हस्तान्तरण गर्न प्रतिवद्ध हुन अस्वीकार गरे।
“ठीक छ, हामीले के हुन्छ हेर्नुपर्नेछ,” राष्ट्रपतिले ह्वाइट हाउसमा एक समाचार सम्मेलनमा भने। “तिमीलाई त्यो थाहा छ।”
श्री ट्रम्पले यो पनि जवाफ दिए कि उनी निर्वाचनको नतिजा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा अन्त्य हुन सक्छ भन्ने विश्वास राख्छन् किनभने उनले फेरि हुलाक मतदानमा श doubt्का व्यक्त गरे।
अधिक राज्यहरूले मेल-इन मतदानलाई प्रोत्साहन दिइरहेका छन्, अमेरिकीहरूलाई कोरोनाभाइरसबाट सुरक्षित राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई उल्लेख गर्दै।
श्री ट्रम्पलाई बुधवार साँझ एक रिपोर्टरले सोधेका थिए कि यदि उनी डेमोक्र्याट जो बिडेनलाई “जीत, हार्ने वा ड्र” गर्ने शान्तिमय शक्ति हस्तान्तरण गर्न प्रतिबद्ध छन् भने। राष्ट्रपतिले निर्वाचन हुन नसक्ने ४१ दिनको साथ राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षणमा आफ्नो चुनौती दिनेलाई ट्रेलमा राखेका छन्।
“म मतपत्रका बारे कडा गुनासो गरिरहेको छु,” रिपब्लिकन श्री ट्रम्पले भने। “र मतपत्रहरू एक आपतकाल हुन्।”
जब पत्रकारले “व्यक्ति दंगा भइरहेको छ” भनेर जवाफ दिए, श्री ट्रम्पले भनेः “मतपत्रहरु हटाउनुहोस्, र तपाईसंग धेरै हुनेछ – तपाईले धेरै शान्तिमय हुनुहुनेछ – त्यहाँ स्थानान्तरण हुनेछैन, स्पष्टसंग, त्यहाँ” एक निरन्तरता हुनेछ। ”
के अमेरिकी हुलाक मतदानले ‘जबरजस्ती ठगी’ निम्त्याउँछ?
अमेरिकी चुनावको लागि हामी कहिले परिणाम पाउने छौं?
२०१६ मा, श्री ट्रम्पले प्रजातान्त्रिक उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनको बिरूद्धको प्रतिस्पर्धामा चुनावी नतिजा स्वीकार गर्न प्रतिबद्ध हुन पनि अस्वीकार गरे जुन उनी प्रजातन्त्रमाथिको आक्रमण हो।
उनलाई अन्ततः विजेता घोषित गरियो, यद्यपि उनले लोकप्रिय मत ३० लाख गुमाए, यसको परिणाम उसले अझै प्रश्न गर्यो।
डेमोक्र्याटले के भने?
गत महिना, श्रीमती क्लिन्टनले यस पटक श्री बिडेनलाई चुनावको रात नजिकैको दौडमा “कुनै पनि परिस्थितिमा” हार नमान्न आग्रह गरे।
रिपब्लिकनले “अनुपस्थित मतदातालाई खलबल्याउने” प्रयास गर्ने र नतिजा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि वकिलहरूको फौज परिचालन गर्ने प्रयास गरे।
कन्जर्भेटिभ्सले श्री बिडेनलाई अगस्टमा यसो भन्दै चुनावमा अशान्ति खडा गरेको आरोप लगाएका छन: “के कसैलाई विश्वास छ कि डोनाल्ड ट्रम्प पुनः निर्वाचित भए अमेरिकामा कम हिंसा हुनेछ?”
ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको बारेमा के भने?
बुधवारको सुरुतिर अमेरिकी राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले चुनाव हुनु अघि नयाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायको नियुक्ति खोज्ने आफ्नो निर्णयको पक्षमा बोले र आफू अदालतको अगाडि मतगणनाको नतीजा अपेक्षित रहेको बताउँदै भने।
“मलाई लाग्छ कि यो [चुनाव] सर्वोच्च अदालतमा समाप्त हुन्छ, र मलाई लाग्छ कि यो महत्वपूर्ण छ कि हामीसंग नौ जना न्यायाधीशहरू छन्,” राष्ट्रपतिले भने।
“मलाई लाग्छ कि चुनाव भन्दा अघि जानु नै यो उत्तम हुन्छ, किनकि मलाई लाग्छ यो घोटाला जुन डेमोक्र्याटले खिंचिरहेको छ, यो घोटाला हो, घोटाला संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालत समक्ष हुनेछ।”
श्री ट्रम्प स्पष्टतः आफ्नो धेरै विवादित दाबीलाई संकेत गर्दै थिए कि मेल-इन मतपत्रहरू धोखाधडीको चपेटामा छन्।
राष्ट्रपतिले यस शनिबार अदालतको लागि महिला उम्मेद्वारको नाम लिने भनेका छन्। उनले न्यायमूर्ति रूथ बडर जिन्स्बर्गलाई प्रतिस्थापित गर्छिन्, जो पछिल्लो शुक्रबार मर्नुभयो।
श्री ट्रम्पका समर्थकहरूले आशा गरे कि उनका उम्मेद्वार, यदि अमेरिकी सिनेटले पुष्टि गरे भने निकट भविष्यको लागि देशको सर्वोच्च अदालतमा ६-३ कट्टरपन्थी आरोहण गर्न सक्नेछन।
आधुनिक समयमा हराएको अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मेद्वारले धेरै कडा चुनावी नतिजामा समेत स्वीकारेको छ।
यसमा १९६० समावेश छ जब जोन एफ क्यानेडीले रिचार्ड निक्सनलाई हल्कासित पराजित गरे र २००० मा जब जर्ज डब्लु बुशले फ्लोरिडामा अल गोरलाई हराए।
के हुलाक मतदान धोखाधडीको लागि कमजोर छ?
कोरोनाभाइरसको जनस्वास्थ्य चिन्ताको कारण हुलाक भोटहरूको संख्या यस पटक उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ।
तर संघीय चुनाव आयोगका आयुक्त एलेन वेन्ट्राउबले भनेका छन्: “मेलद्वारा मतदानले ठगी गर्छ भन्ने षड्यन्त्रको सिद्धान्तको कुनै आधार छैन।”
हुलाक मतपत्र धोखाधडीको पृथक घटनाहरू भएको छ, जस्तै २०१ North नर्थ क्यारोलिना प्राइमरीमा, जुन रिपब्लिकन उम्मेदवारका लागि परामर्शदाताले मतदान कागजातमा छेडछाड गरेपछि पुनः चलाइएको थियो।
यस वर्ष न्यू जर्सीमा एउटा केस पनि आएको थियो जसमा दुई डेमोक्रेटिक काउन्सिलहरूले हुलाक मतदानको सम्बन्धमा कथित धोखाधडी गरेको आरोप लगाएका थिए, सयौं मतपत्रहरू एक पोष्ट बाकसमा भरिएको पाए पछि।
ब्रेनन सेन्टर फर जस्टिसको २०१७ को अध्ययन अनुसार संयुक्त राज्यमा कुल fraud०.००००४% र ०.००००९% बीच भोट ठाउको दर छ।
हुलाकी मतपत्र हराउने सम्भावना धेरै छ, तथापि, म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका राजनीतिक वैज्ञानिक चार्ल्स स्टीवर्टको अनुसन्धानले भने।
उनले गणना गरे कि २००८ को चुनावमा भोट-मेल प्रणालीबाट हराउने मतहरूको संख्या ७.६ लाख जति हुन सक्छ, वा five जना मध्ये एक व्यक्ति जसले आफ्नो मतपत्र पोष्ट गर्न कोशिस गरे।